घरेलु हलमा नेपाली चलचित्रको प्रदर्शन दयनिय देखिएको धेरै भैसक्यो । लामो समयदेखि नेपाली चलचित्रले बलिउड र हलिउडको झापड खाइरहेका छन् ।
हालखबर पुष महिनाको हो । जाडो मौसम, खासै चलचित्र चल्दैनन् भन्दै नेपाली चलचित्रकर्मी चलचित्र प्रदर्शन गर्न डराउँछन् । तर, यहि महिना नेपाली बजारमा बलिउड र हलिउड चलचित्रले आक्रामक ब्यापार गरिरहेका छन् । नेपाली दर्शक जाडोको कारण घरमा आगो तापेर बसेका छैनन्, हलिउड र बलिउड चलचित्र हेर्न थामिनसक्नु भिड छ ।
बलिउड–हलिउडको डरले नेपाली चलचित्र यो महिना हल छिर्न डराए । पुषको अन्तिमसम्म आइपुग्दा आफ्नै हलमा नेपाली स्वाद घुलिएका चलचित्र दर्शकले हेर्न पाएका छैनन् । यो एक महिना बलिउड र हलिउड चलचित्रको दबदबा देखिएको छ ।
मंसिरको अन्तिम साता प्रदर्शन भएको नेपाली चलचित्र ‘प्रेम संसार’पछि हलमा नेपाली चलचित्र छिरेका छैनन् । पुषको १८ मा चलचित्र सुस्केरा आउने भनिएको थियो, तर यो चलचित्र समेत प्रदर्शन मिति पछि सारियो । त्यसो त यो चलचित्र निर्माण भएको धेरै बर्ष भयो ।
आउँदो शुक्रबार नेपाली चलचित्र ‘१२ सत्ताइस’ प्रदर्शन हुनेवाला छ । यो चलचित्रको स्थिती कस्तो हुने हो ? दर्शकले कत्तिको पत्याउँछन् ? त्यो केहि दिनमै थाहा हुनेछ । तर डर कहाँनिर छ भने, आज शुक्रवारदेखि बलिउड चलचित्र ‘छपाक’ प्रदर्शन भएको छ । यसले दर्शक तानिरहेको छ । समिक्षकहरुले यो चलचित्रलाई उत्कृष्ट विषयमा निर्माण भएको उत्कृष्ट चलचित्र भनिरहेका छन् । हलमा दर्शकको ओइरो लागिरहेको छ । र, अघिल्लो हप्तादेखि प्रदर्शन भैरहेको अर्को हिट चलचित्र ‘गुड न्युज’ हलमा केहि दिन टिक्न सक्ने सम्भावना छ । सोहि कारण यी दुई चलचित्रको चपेटामा नेपाली चलचित्र ‘बाह्र सत्ताइस’को च्यापिने सम्भावना रहेको नेपाली चलचित्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
यो महिना बहुप्रतिक्षित बलिउड चलचित्र दबंग ३ र गुड न्युजले तहल्का पिटे । महिनाको अन्तिममा प्रदर्शनमा आएको छ, छपाक । बलिउडका पावरफुल समिक्षक मानिएका तरण आदर्शले त यो चलचित्र बर्षकै उत्कृष्ट भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनी मात्रै होइन, अरु धेरै चलचित्रकर्मी र समिक्षकले यो चलचित्रको निकै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । त्यस्तै, बलिउडको अर्को प्रतिक्षित चलचित्र ‘तानाजी’ समेत प्रदर्शनमा आएको छ । छपाक र तानाजीले मल्टीप्लेक्समा उच्च सोज पाएका छन् । त्यस्तै, दुई हलिउड चलचित्र ‘अन्डरवाटर’ र ‘डूलिटिल’ पनि प्रदर्शनमा आएका छन् । मल्टिप्लेक्समा धमाधम चलचित्र आइरहेका बेला सिंगल थिएटर भने चलचित्रविहिन हुन पुगेका छन् ।
८ महिना पनि विदेशी चलचित्रकै कब्जा !
त्यसो त पछिल्लो ९ महिना पनि नेपाली चलचित्र हल विदेशी चलचित्रकै कब्जामा रह्यो । बैशाखदेखि कात्तिकसम्म हलमा नेपाली चलचित्र धमाधम आए, तर अधिकांश चलचित्रका निर्माताको लगानीको ब्याज समेत उठ्न सकेन । अहिलेसम्म आइपुग्दा ५० को हाराहारीमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भएको देखिन्छ । तर, जात्रै जात्रा, कबड्डी ३ र छ माया छपक्कै हिट चलचित्रको सुचीमा देखिए । दाल भात तरकारी र अरु केहि थोरै चलचित्रले पनि लगानी उठाउन सके । अघिल्लो बर्ष धमाधम चलचित्र फ्लप भएपछि यो बर्ष नेपाली चलचित्रको दौडानमा निकै थोरै चलचित्र निर्माण भएका छन् । असाध्यै थारै चलचित्र प्रदर्शन भएका हुन् ।
यो बर्ष को अन्तिम सम्म आशा राखिएका केहि अरु चलचित्र समेत प्रदर्शन हुँदैछन् । चलचित्र निर्माणमा गम्भिर हुन नसक्दा नेपालका चलचित्रले लोप्पा खाइरहेका छन् । मिहेनत कम गर्ने, अर्को चलचित्रसँग भिडाउने र विषयवस्तुमा ध्यान समेत नदिएर चलचित्र प्रदर्शन गर्दा नेपालका धेरै निर्माता घरवार विहिन समेत हुन पुगेका छन् । तर, हल्लाको भरमा धेरैले यो पिडा न देख्न सकेका छन् । न सुन्न खोजेका छन् ।